Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato khariidadaha roobka | Saadaasha Shabakadda
Adduunyada saadaasha hawada, khariidado matalaya xaaladaha dabaylaha, duufaanka, anticyclones, iwm aad ayey muhiim u yihiin. Si aad u awoodo saadaalinta cimilada. Khariidadaha hawadu waa wax aan ka badnayn matalaad sawirro ah oo naga caawinaya inaan ogaano qiimaha ay is-beddelka saadaasha hawada qaarkood ku leeyihiin aag juqraafiyeed oo gaar ah. Dhammaan khubarada saadaasha hawada waxay adeegsadaan khariidadahaas, maaddaama adeegsigooda uu bixinayo aqoon badan iyo sawir xiiso leh oo ku saabsan dhammaan xaaladaha aan ka heli karno jawiga.
Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa roobka ama khariidadaha roobab. Ma rabtaa inaad ogaato sida khariidaduhu u shaqeeyaan iyo qaabka ay uga caawiyaan saadaalinta cimilada?
1 Isbeddelada cimilada
2 Khariidadaha roobka iyo foodda hore
3 Khariidadaha kale ee roobab
4 NASA iyo khariidada roobka adduunka
Si loo ogaado sida cimiladu noqon doonto maalinta xigta, khubarada saadaasha hawadu waxay daraaseeyaan qaar ka mid ah isbadalada saadaasha hawada ee ugu muhiimsan ee bixiya macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jawiga. Mid ka mid ah doorsoomayaasha bixiya macluumaad dheeri ah waa cadaadiska Hawada. Dhulka dushiisa, cadaadiska jawiga waxaa lagu muujiyey khariidada isobar. Isobars waa khadadka cadaadiska hawadu isku mid yahay. Sidaa darteed, khariidadaha lagu arki karo isobarsyada si weyn u kala fog, waxay ka dhigan tahay cimilo wanaagsan iyo xasiloonida jawiga.
Dhinaca kale, haddii khariidada isobar ay leedahay xariiqyo badan oo wadajira, waxay ka dhigan tahay duufaan ama duufaan soo socota. Laakiin su'aal ayaa ka dhalanaysa waxaas oo dhan, maxay khadadka cadaadiska isku midka ah u muujinayaan in duufaan soo socota Xiriirka ka dhexeeya cadaadiska Hawada iyo suurtagalnimada roobab waa sidan soo socota. Markay u dhowdahay isobarsyadu, ayay sii weynaanaysaa xoojinta ay dabayshu ku dhacayso, sidaa darteed, waxaa jiri doona xasillooni darro ka sii badan jawiga. Deganaansho la’aantani waxay sababi kartaa roob sida aan gadaal ka arki doono.
Khadadka isobar sidoo kale waa suurtagal in lagu ogaado haddii dabaysha soo socota ay ka sii diirnaan doonto, ka qoyan tahay, haddii ay ka timid cirifka ama haddii ay ka timid qaaradda. Haddii khariidada isobar aan ka helno aag ay cadaadiska hawadu ka sareyso, "A" ayaa la dhigayaa oo macnaheedu waa inay jirto anticyclone. Tani waa aag ka mid ah xasiloonida jawiga weyn, maaddaama dhaqdhaqaaqa hawadu hoos u socdo iyo iska ilaali sameynta daruuraha. Sidaa darteed, xaaladdan oo kale aad ayey ugu adag tahay inay roob da'o.
Taas bedelkeeda, haddii cadaadisku bilaabmo inuu yaraado, barta uu qiimuhu gaadho ugu yaraan "B" ayaa la dhigayaa waxaana la sheegay inay jirto aag cadaadis hooseeya. Xaaladdan oo kale waxaa jiri doona xasillooni darro ka sii weyn jawiga iyo waxaa jiri doona shuruudo dheeri ah oo roob da'a. Marka aaga cadaadiska hoose uu weheliyo cimilada roobka iyo dabayl aad u daran, waxaa loo yaqaan squall.
Khariidadaha roobka iyo foodda hore
Khariidadaha roobka foodaro ayaa sidoo kale la muujiyay kuwaas oo la sameeyo marka miisaska hawadu, qabow iyo diirimaadba, kulmaan oo ay ka dhashaan roobab culus. Waqooyiga Hemisphere, ee anticyclone, dabayshu waxay u jeesataa raacitaanka isobars saacad-socod iyo u janjeedha in laga guuro xarunta. Waa inaan xasuusnaano in dabayshu had iyo jeer u dhaqaaqi doonto meelaha ay ku yar tahay cimilada jawiga.
Dhinaca kale, aagga cadaadiska hooseeya, dabayshu waxay u socotaa saacad ka hor waxayna aadeysaa bartamaha cadaadiska hoose.
Markaad rabto inaad matasho jihooyinka khariidadaha roobab, isobars ayaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo jihada iyo haddii hore ee diiran ama qabow yahay. Jihooyinka qabow ayaa matalaya by saddexagallo yaryar iyo kuwa diirran oo ku saabsan wareegyada wareega ku midoobay khad daboolaya gobolka oo dhan kaas oo qabsan doona wejiga hore.
Wejiga hore waa wax aan ka badnayn aag ballaaran oo xasiloonida cimilada ah halkaasoo ay ku kulmaan laba hawo oo heerkullo kala duwan leh. Haddii cufnaanta hawada qabow ay gaarto meel heer kulkeedu sarreeyo, weji qabow ayaa sameysma. Markay taasi dhacdo, heerkulka guud hoos buu u dhacayaa oo roobabku badanaa waxay u dhacaan qaab roob ama baraf ah. Taas bedelkeeda, haddii cufnaanta hawadu ay gaarto meel heer kulkeedu sarreeyo, weji diiran ayaa sameyn doona. Xaaladdan oo kale, daruuro ayaa sidoo kale sameyn doonta, laakiin heerkulku wuu sii fududaan doonaa roobkiina wuu yaraan doonaa
Khariidadaha kale ee roobab
Si loo helo dareen wanaagsan oo xagga cimilada ah, khubarada saadaasha hawadu ma eegi karaan oo keliya khariidadaha isobar, laakiin sidoo kale waxay eegi karaan is-beddelayaasha saadaasha hawada ee kale. Tusaale ahaan, nooc kale oo khariidado ah oo la isticmaalay waa kuwa cimilada dherer ahaan, loo yaqaan isohipsas ama khariidadaha geopotential. Isohipsas waa xariijin isku xiraya dhibco ku yaal isla dherer isla markaana ku jira heer cayiman oo ah cadaadiska Hawada. Khadadkaani waxay xiriir dhow la leeyihiin heerkulka hawada ee lakabyada jawiga. Qiyaastii 5.000 mitir oo sare, cadaadiska jawiga hawada waa 500 hPa.
Sida ku xusan munaasabadaha kale, hawada diiran, isagoo cufan ka yar ayay u eg tahay inuu kaco. Markay tani dhacdo oo lakabyada sare ee jawiga waxay la kulmaysaa hawo aad u qabow, dhaqdhaqaaqyo hawo oo toosan ayaa dhici doona kuwaasoo sababi doona xaalado xasillooni darro oo roob da'o.
Xaaladahan xasilooni darada jawiga waxay dhacdaa marka khariidada is-goosadka la muujiyo sariir ama qiime hoose oo juquraafi ah. Dhinaca kale, haddii qiyamka juquraafiyeedku ka sarreeyo iyo go'doominta sameyso cirif, Waa xaalad hawadu ku jirto dhererkeedu heerkulkeedu sarreeyo, sidaa darteedna, xaaladda saadaasha hawadu way deggan tahay oo lagama yaabo inay roob da'o.
NASA iyo khariidada roobka adduunka
Sannadkii 2015, NASA waxay soo saartay khariidad roob-doon oo caalami ah oo la cusbooneysiiyo saddexdii saacadoodba mar waxayna muujineysaa guud ahaan hannaanka roobka ee heer caalami iyo waqtiga dhabta ah. Khariidadan roobabku waxay u saamaxaysaa saynisyahannada inay si fiican u fahmaan sida duufaanta iyo dabeyluhu ugu socdaan dhammaan meelaha adduunka.
Waa kuwan qayb yar oo ka mid ah sida khariidadda roobka ee NASA u shaqeyso:
Sidaad aragtay, khariidadaha roobku waa qayb aad muhiim ugu ah saadaasha hawada ee saadaasha hawada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Khariidadaha roobka
Onofre Pastrana Ortiz dijo
Waa salaaman tahay, subax wanaagsan Germán Protillo, waxaan ka helay wax ku biirintaada Khariidadaha Roobka mid aad muhiim u ah, su'aashaydu waxay tahay: Isbadalkee ayaa lagugula talinayaa inaad aqriso cadaadiska jawiga (hectopascals ama millibars). Farxad
Jawaab Onofre Pastrana Ortiz
Haye, cabirka ay inta badan adeegsadaan khubarada saadaasha hawada iyo fiisikiska waa kan milibaar.
Aad baad ugu mahadsantahay faalladaada, salaan!